အသေးဆုံးကြိုးမဲ့မိုက်ကရိုဖုန်း Sabinetek မှ SmartMike + သုံးသပ်ချက်ကို Gadget သတင်း
Sabinetek မှ SmartMike + ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | ပစ္စည်းများ, ရုပ်ပုံနှင့်အသံ, reviews
ဒီနေ့ငါတို့နှင့်အတူလာကြ၏ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ဝါသနာတွေထဲမှာဒါမှမဟုတ်ပညာရှင်ပီသစွာရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူတွေအတွက်။ SabineTek ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည် SmartMike + ဘလူးတုသ်မိုက်ခရိုဖုန်း.
ပေးမယ့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း အသံမှတ်တမ်းတင်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးကြောင့်သင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားစေတယ် ကမ်းလှမ်းသည် သေးငယ်တဲ့မိုက်ကရိုဖုန်း သင်၏အသံဖမ်းစက်ကိုအနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည် ဒါ့အပြင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်အသံနှင့်အတူကတိုးတက်အောင်အောင်.
1 SabineTek SmartMike +, သင်ရှာနေသောမိုက်ခရို
2 SmartMike + box ကိုအကြောင်းအရာ
3 ဒီဇိုင်းနှင့် SmartMike + ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်
4 SmartMike + သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောနည်းပညာအားလုံး
5 SmartMike + သတ်မှတ်ချက်များဇယား
6 Sabinetek ၏ SmartMike ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
SabineTek SmartMike +, သင်ရှာနေသောမိုက်ခရို
အကယ်၍ သင်သည်ဂီတကိုနှစ်သက်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်လိုလျှင်။ သင် Podcast တခုကိုတွင်ပါဝင်လျှင်။ အကယ်၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ SabineTek SmartMike + သည်အပိုဆောင်းအသုံးအဆောင်ဖြစ်သည်။ ကြိုးမဲ့မိုက်ကရိုဖုန်း ကြိုးမဲ့နှင့်လူတိုင်းလိုချင်သောအသံအရည်အသွေးနှင့်အတူ သင့်ရဲ့ vlog သို့မဟုတ်သင်၏ဆက်သွယ်မှုများအတွက်။ ဤနေရာတွင် Amazon ၌ SmartMike + တွင်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးသည်
သူတို့အားကြီးမားသောဘူးကိုမေ့လျော့ နှင့်အဝတ်အစားအတွင်းပိုင်းမသက်မသာကြိုး။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်တွင်ရိုးရိုးညှပ်ညှပ်ဖြင့်သင်၌အများဆုံးရှိလိမ့်မည် သမားရိုးကျ mono မိုက်ကရိုဖုန်းထက် ၆ ဆပိုမိုမြင့်မားသည်. ဆက်သွယ်မှု ဘလူးတုသ် ၄.၂ အာမခံချက်တည်ငြိမ်ရေးနှင့် လက်ရှိဒီဇိုင်း အရာ၏ငါတို့သည်သင်တို့အောက်တွင်အရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
Vlogger တိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာအကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံ သို့မဟုတ်သင်၏ podcast ကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပါ၊ မကြည့်ပါနှင့်။ SmartMike + သည်သင့်လျော်သောမိုက်ခရိုဖုန်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ သင်ကယူပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏စွမ်းရည် ဆူညံသံလျော့ချခြင်း မိတ်ကပ် အိမ်ပြင်တွင်အသံသွင်းခြင်းသည်ပြaနာမဟုတ်တော့ပါ.
SmartMike + box ကိုအကြောင်းအရာ
၎င်းသည် unboxing တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ကြိုးမဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းကဲ့သို့သောကိရိယာတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ အတွင်းကိုကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ SabineTek ၏အထူးသီးသန့်မိုက်ခရိုဖုန်းအကွက် ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသမျှကိုပြောပြရန်။
မိုက်ခရိုဖုန်းအပြင်အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော element များစွာကိုတွေ့ရသည်။ နားကြပ်နဲ့မတူတာကများများရှိတယ် SmartMike + ပိုမိုပြည့်စုံစေရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ.
ငါတို့ရှိသည် cable ကိုအားသွင်းနေစဉ်, ပုံစံနှင့်အတူ မိုက်ကရို USB မှ USB သို့။ ငါတို့သည်လည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် နားကြပ် mono, တစ်ခုတည်းနားရွက် ၃.၅ မီလီမီတာ input ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ် SmartMike + ရှိတဲ့။ Y အမှုတင်ဆောင်သေးငယ်တဲ့အထည် မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သေးငယ်တဲ့အပြင် အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်မှုလမ်းညွှန်သည်အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြည့်စုံသောတရုတ်ဘာသာဖြင့်သာရနိုင်သည်ငါတို့မှာအခြားအပိုဆောင်းရှိသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် မိုက်ခရိုဖုန်းforရိယာများအတွက် '' ပါးပျဉ်း ''တစ် ဦး ရေမြှုပ် နှင့်အခြား ဒြပ်ဆံပင် ကြာကြာ နှစ် ဦး စလုံးအစေခံ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူသို့မဟုတ်ပြင်ပဆူညံသံများမှဆူညံသံကိုရှောင်ရှားရန် အပြည့်အဝကူသွင်းထားသောလေကဲ့သို့၎င်း။
ဒီဇိုင်းနှင့် SmartMike + ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်
ဤအမျိုးအစား၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင်၊ SmartMike + တွင်လည်းရှိသည် လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်း။ တစ်ခုရှိသည် နှစ်ခုအရောင်များအတွက်သတ္တုကိုယ်ထည် combinedုံပေါင်းစပ်။ ကျနော်တို့ဗားရှင်းနှစ်ခုရှာတွေ့, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်, အရှည်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်နှင့်မိုက်ခရိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ရှိရာareaရိယာ၌သတ္တုအရောင်နှင့်အတူ။
၎င်း၏အောက်ခြေမှာ, ကျွန်တော်တို့ကညှပ်နှင့်အတူထားရှိအသုံးပြုသည်ဆိုပါကချလိမ့်မယ်လို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါတို့ရှာပါ တင်ဆိပ်ကမ်း။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး input ကိုဖြစ်ပါတယ် မိုက်ခရို USB အဘယ်သူ၏ cable ကိုအားသွင်းများအတွက် box ထဲမှာပါဝင်သည်။
ထဲမှာ ရှေ့အပိုင်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခါမြင်နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် သေးငယ်သော LED အလင်း သင်ရိုက်ကူးနေတယ် (သို့) ခေတ္တရပ်နားထားခြင်းအပေါ် မူတည်၍ အရောင်များပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ တက်ကြောင်းဘက်မှာကျနော်တို့ရှာပါ တစ်ချက်မှာမိုက်ကရိုဖုန်းကိုယ်နှိုက်။ ကျွန်တော်တို့အကွက်ထဲမှာတွေ့တဲ့သေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ Micro ပါ။ သင့်ရဲ့ဘက်မှာ, ငါတို့perfectlyုံတည်ရှိပြီး, ပါဝါခလုတ်ကို။ တစ် ဦး elongated format နဲ့ အရောင်၏မှတ်စုပေးသည်သောအနီရောင်အရောင်၌တည်၏.
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး ငါတို့ရှိသည် 3,5mm mini ကို jack ကို input ကို သင် Analog နားကြပ်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်မည့်နေရာ။ ကျနော်တို့စကားပြောတစ်ချိန်တည်းမှာအသံ input ကိုရှိသည်ဖို့အစေခံလိမ့်မည်ဟုအရာတစ်ခုခု။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု (သို့) ဥပမာဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အသံဖိုင်တစ်ခုတွင်စကားလက်ဆုံကိုအပြည့်အဝထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါက ဤနေရာတွင် SmartMike + ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ယခုဝယ်ယူပါ
SmartMike + သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောနည်းပညာအားလုံး
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲစျေးကွက်ထဲမှာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမိုက်ခရိုဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်နေရုံသာမကဘဲ။ စူပါကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောပုံစံနှင့်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းအပြင်, SmartMike + သည်အကောင်းဆုံးသောနည်းပညာများတပ်ဆင်ထားသည် သင်၏အသံသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအသံကိုပေးသည်။
ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့မှတ်တမ်းတင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏အရေးကြီးသောအသေးစိတျတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ SmartMike + ရှိပါတယ် ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီ, အရာတစ် ဦး အနည်းငယ်သာပုံရသည်သော။ သို့သော်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအလွန်ကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကို ၅ နာရီအထိမပြတ်မတည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်သည်.
ဒါဟာအတွင်းပိုင်းရှိပါတယ် တစ်ခုသီးသန့်ထုတ်လုပ်သော chip ကို အဘယ်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်၎င်း၏လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းအရင်းအမြစ်အားလုံးအများဆုံး optimization အောင်မြင်ခဲ့သည်, အဆိုပါ Qualcomm မှ CSR8670။ ခွင့်ပြုသည် အရည်အသွေးကောင်းသောအသံနှင့်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဆူညံသံလျှော့ချမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် TWS နည်းပညာ, အ SmartMike + အခြားတန်းတူရည်တူများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး၊ တွေ့ဆုံသူများအများအပြားရှိလျှင်တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်သည်.
Sabinetek ၏မိုက်ခရိုဖုန်းကို သုံး၍ ဖုန်းပြောနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ သေတ္တာထဲ၌ရှိသောနားကြပ်များမှအသံကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ၄၉.၂ ပေအကွာအဝေးအတွင်းရှိ Ultra-low latency Multi-channel အသံထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းသည်အသံကိုမှတ်မိနိုင်ပြီးတည်းဖြတ်နိုင်သောစာတန်းထိုးဖိုင်များအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
SmartMike + သတ်မှတ်ချက်များဇယား
ပုံစံ SmartMike +
ချစ်ပ် Qualcomm က CSR8670
နမူနာနှုန်း ၄၄.၁ ခဇ
protocol ကို A2DP - HFP - ဆွစ်ဇာလန်
ဘက်ထရီ 110 mAh ဘက်ထရီ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ၃ နာရီအထိ
Ancho က de Banda ၄၄.၁ ခဇ
analog interface 3.5 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 14 ဂရမ်
ရှုထောင့် X ကိုက x 5.8 1 1.5 စင်တီမီတာ
စြေး 132.99 €
ဝယ်ယူ link ကို SmartMike +
Sabinetek ၏ SmartMike ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
အရွယ် တစ် ဦး က Pen Drive ကိုဆင်တူလျှော့ချ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အသုံးပြုမှုအထိ5နာရီ ဆက်ပြောသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Sabinetek မှ SmartMike + ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
2 လအခမဲ့ Google Stadia Pro ကိုဘယ်လိုစမ်းရမလဲ